Ogaden News Agency (ONA) – Kulan dhexmaray Hogaanka Arimaha Ururka iyo Gudida Fulinta OYSU
Kulan dhexmaray Hogaanka Arimaha Ururka iyo Gudida Fulinta OYSU
Hoggaanka Arrimaha Ururka Mudane Xuseen Nuur iyo Gudiga Fulinta ee OYSU ayuu kulan hordhac ah u qabsoomay Sabtidii aan soo dhaafnay.
Kulankan oo uu codsaday Hogaanka Arimaha Ururka ayaa waxaa kasoo qayb galay shan xubnood oo katirsan gudiga fulinta ee OYSU heer Caalami,wuxuuna kulanku socday muddo hal saac.Ujeedada iyo qodobada kulankaas loo qabtay ayaa waxay ka koobnaayeen:
1) Isbarasho iyo kala warqaadasho guud maadaama Hogaanka ururku masuul cusub yeeshay
2) Sidii loo curin lahaa fikrado cusub oo halganka waxtar uleh,loona dardar galin lahaa doorka dhalinyarada kaga aadan halganka.
3) Sidii Hoggaankaa Arimaha Ururka iyo OYSU xidhiidh joogta ah uyeelan lahaayeen
4) Sidii loo dardar galin lahaa doorka dhalinyarada kaga aadan halganka
Gudiga OYSU wuxuu mahadnaq iyo bogaadin buuxda usoo jeediyay Hoggaanka Arrimaha Ururka.
Sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay qodobada uu soo dhigay.
Waxaa laga ra’yi dhiibtay qodobada kor ku xusan isla markaana masuuliyiinta qaar soo dhigeen aragtiyo dheeraad ah.
Hoggaanka Arrimaha Ururku wuxuu boggaadiyay dhalinyarada kadib kolkii uu dhagaystay fikradahooda iyo baahida ay uqabaan la kulanka hoggaanka.
Haddaba, isdhagaysi iyo fikir wadaag dheer kadib, kulanka HAU iyo OYSU waxaa la isla qaatay labo qodob oo kala ah:
1) In dhalinyaradu diyaariso kulan kan ka balaadhan oo dhexmara Hoggaanka Ururka iyo Gudiga OYSU, kaa soo hadafkiisu yahay sidii loo daraasadaysan lahaa qaabka ugu sahlan ee looga gudbi karo caqabadaha ku yimaada habsami usocodka howlaha Hogaanka iyo ururka OYSU.
2) In Hoggaanka Arrimaha Ururku uu soo diyaariyo barnaamij lala wadaagayo dhalinyarada oo la magac baxay Hoggaamintii Biri (Future Leadership), kaa soo noqon doona tababar camali ah oo lagu kobcinayo tayada hoggaamineed ee dhalinyarada.